भोली बिहिबार देशभरिका अस्पतालमा ईमेरजेन्सी बाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प हुने
२ श्रावण, २०७५ || प्रकाशित २१:५४:११
काठमान्डौँ, २ साउन । आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै भोली विहिबार देशभरिकै अस्पतालमा ईमरजेन्सी सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने भएको छ ।
केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको संघको ठहर गर्दै सरकारी वार्ता टोलीलाई पूर्ण अधिकार नदिई डा. केसीलाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थितिमात्र सृजना गर्न वार्तामा बसेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको संघले जनाएको छ ।